I-china High elastic non-slip posture line TPE yoga mat wholesale Ukwakha kanye nefektri | I-Tianzhihui
Umugqa wokunwebeka wokuqina ongasheleleki we-TPE yoga mat wholesale
Kusetshenziswe imidwebo eyahlukene ngaphambili nangemuva kohlaka lwe-yoga, olungadlala umphumela omuhle wokulwa ne-skid lapho wenza izivivinyo ze-yoga futhi uthuthukise ukuphepha kokuvivinya umzimba. Umkhiqizo usebenzisa i-TPE esezingeni eliphakeme njengempahla eluhlaza, enobungani bemvelo, engeyona enobuthi, futhi okungelula ukuyidabula.
Isisindo somkhiqizo: I-800g ± 100 (G)
Umkhiqizo wenziwe ngezinto ezintsha sha ze-TPE, asikho isidingo se-thermal vulcanization, yonke inqubo yokukhiqiza isebenzisa ubuchwepheshe bokuguqula ukuhola embonini, ukubunjwa okushisa okuzenzakalelayo okulawulwa ngamakhompiyutha okuzenzakalelayo;
Umkhiqizo umsulwa ngokwezinto zokwakha, akukho zinto zesibili (imfucuza) futhi noma yiziphi izinto eziyingozi ezingeziwe, izinsimbi ezisindayo azifakwanga, akukho ukunambitheka okucasulayo, futhi kunezelwa nezinto ezilwa namagciwane.
Igama: I-TPE high elastic non-slip yoga mat wholesale
Ubukhulu: 6 mm no-8mm
Isisindo: Cishe ngama-gram ayi-1000
Usayizi womkhiqizo: 183 * 61 * 0.6cm no-183 * 61 * 0.8cm
Usayizi webhokisi: 51 * 39 * 63 no-58 * 44 * 63 (izingcezu eziyi-12 / ibhokisi)
Ngokwezifiso: Umklamo wamahhala wemigqa ehlukahlukene yokuma kanye nokuphrinta. Imibala ehlukahlukene, amaphethini nokucaciswa kungenziwa ngezifiso ngokushesha ngokuya ngezidingo zokuthenga. I-embossing ehlukahlukene, isikrini sikasilika, ukuphrinta okushisayo, i-UV yedijithali, ukuphrinta kwe-laser namaphethini we-LOGO kungaphrintwa kumata.
Isitifiketi: Umkhiqizo udlule ukuhlolwa kwe-6P kanye nesitifiketi se-SGS samazwe omhlaba
Noma ngabe umbala, ilogo, noma umugqa, kungenziwa ngezifiso.
Usayizi ojwayelekile kanye nosayizi wokunwetshwa kwemikhiqizo.
Usayizi ojwayelekile: 183 * 61 * 0.6 (CM)
Enye i-183 * 80 * 0.6; Usayizi wokunwetshwa we-183 * 61 * 0.8 (CM). Uma udinga ukwenza ngokwezifiso usayizi, ungaxhumana nomphathi we-akhawunti online Nikeza ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
Ukuthungwa okunamacala amabili, Dlala ukusebenza okuhle kakhulu kwe-anti-skid.
Ukuhuzuka nokumelana nezinyembezi
Ukubuyisa okuhle, ukuthinta i-latex
I-yoga mat ifanelekile: Ama-Sit-ups, i-Aerobics, Ukuqina kwangaphandle, Ukuxhaswa kwe-Flat, ama-push ups, i-Yoga practice njll. Izinkambu eziningi.
Umkhiqizo workshop shot real
Langaphambilini I-TPE Yoga Mat Isitolo esidayisa yonke impahla yaseChina
Olandelayo: induku yokuqeqeshwa kwezemidlalo enhlobonhlobo induku i-Feilishi rod wholesale
okungewona ubuthi we-yoga mat
Umugqa wokuma we-yoga mat
ukudayiswa kwe-yoga mat
Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, iphazili yokuzivocavoca mat, Isikhwama Sokuhamba seYoga, Isikhwama se-Yoga Sling, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat,